LOUDNESS, Kintan’ny Mozika Metaly Japoney Voaroaka Tao Amin’ny Sisintany Amerikana · Global Voices teny Malagasy
Some Japanese fans blame "Donald Trump's wall."
Voadika ny 21 Avrily 2017 16:50 GMT
Akira Takasaki, mpitarika ny mpitendry gitara ao amin'ny LOUDNESS. “Tena kivy be”. Sary an'i Frank Schwichtenberg, mpampiasa. Asa manokana. Lisansa: CC BY-SA 3.0
Voalaza fa nolavina ny fidiran'ilay tarika Japoney mpilalao mozika mavesatra, LOUDNESS, tany Etazonia ny alin'ny 18 aprily taorian'ny nahatongavany tany Los Angeles mba hanomboka ny fitetezam-paritra hataony any Amerika Avaratra. Efa mahazatra ny tarika ny mitety an'i Etazonia tao anatin'ny 30 taona lasa, ary ity no voalohany naha-voaroaka azy teo am-pidirana.
Avy hatrany dia nokianin'ireo mpankafy sy mpanaramaso ireo politika henjan'ny fifindramonina, toy ilay ezaka mba “handraràna ny Silamo”, lalàna navoakan'ny fitondrana vaovaon'i Trump hatramin'ny nandraisan'izy ireo ny asany tamin'ny Janoary. Ny hafa nanamarika fa hatramin'ny fanafihana tamin'ny 11 Septambra 2001, lasa sarotra kokoa ho an'ny mozika vahiny ny manao fitetezana an'i Etazonia, ka nahatonga azy ireo hanontany tena raha toa i Etazonia, toa an'i Japana nandritra ny vanimpotoanan'ny Edo, ka miditra ao anatin'ny “vanimpotoanan'ny fitokanany monina” (鎖国, sakoku).
Tokony tao amin'ny Reggie, trano filanonana amin'ny alina any Chicago no hanomboka ny fitetezany an'i Amerika Avaratra ny LOUDNESS tamin'ny 19 Aprily. Navoakan'ny Reggie tao amin'ny Facebook ho an'ireo manana tapakila ny vaovao, niampanga ireo politika “vaovaon”‘ny sisintany ho anton'ilay fanafoanana.
Noho ireo politika vaovao hentitra izay napetraky ny governemanta Amerikana ho an'ireo vahiny hiditra ao amin'ny firenena, tsy navela hiditra aty Etazonia ny Loudness ary naverina nody io maraina io.
Fantatra tamin'ny hira toy ny “Crazy Nights” sy “Crazy Doctor“, nitsangana tao Japàna tamin'ny 1981 ny tarika LOUDNESS, ary niditra tao amin'ny tontolon'ny mozika metaly sy rock milamina nandravarava nandritra ny folo taona manaraka. Nitohy tao anatin'ny tsara sy ny ratsy nandritra ny telopolo taona lasa, tamin'ny fitazonana mpankafy mafàna fo avy any ifotony nonina tao Japana sy eran'izao tontolo izao.
Niparitaka haingana tamin'ny haino aman-jery sosialy ny vaovao hoe nofoanan'ny tarika ilay fitetezam-paritra farany.
— Martin Fackler (@facklernyt) April 20, 2017
Nofoanan'ny LOUDNESS ireo daty fitetezana an'i Amerika hoavy rehetra taorian'ny tsy nahazoany niditra tany Etazonia. Toa ireo fepetra vaovao momba ny vahiny mpitsidika an'i Etazonia no tokony homena tsiny
Lahatsoratra: “Tsy navela hiditra ao Etazonia ny LOUDNESS”. Koa satria tsy navela hiditra any Etazoina ny tarika noho ireo fitsipika vaovao henjana, dia nofoanana ny fitetezam-paritra.
Nanamafy izay nitranga'ireo mpikambana ao anatin'ny tarika. Taorian'ny fiverenany tany Tokyo, nibitsika i Akira Takasaki, mpitarika ny tarika, mpitendry mahay zava-maneno maro sady “andriamanitry ny gitara” :
— Akira Takasaki (@loudness222) April 19, 2017
Tafaverina aty Osaka aho rehefa avy nanao sidina nandritra ny 27 ora. Tena kivy be.
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy i Minoru Niihara, mpihira, fa tany aloha ny LOUDNESS dia tsy mbola voarara tsy hiditra tany Etazonia velively.
Toa nionona ireo mpankafy amin'ny hoe mety ho sarotra ho an'ilay tarika ny hitety an'i Etazonia mandritra ny vanimpotoana Trump.
— ゆう@チラシの裏 (@you7030uc) April 19, 2017
Mety ho ny tendron'ny ranomandry fotsiny ireo olan'ny LOUDNESS teny amin'ny sisintany. Mandritra ny fitondran'i Trump, mety mbola hisy tarika sy mpanakanto hafa tsy hahazo intsony hitety an'i Etazonia..
Avy hatrany ireo tsaho dia nihodinkodina teo amin'ny antony nandàvana ny fidiran'ilay tarika. Nanontany tena ny mpankafy iray raha nikaroka tany anatin'ny findain'ny tarika ary nahita antony hanakanana azy ireo ny mpiasan'ny fadin-tseranana sy ny sisintany:
— tweet ☯️ meme (@_Eugene___) April 19, 2017
Angamba nahita teny manaitra mifandray amin'ny hetsi-panoherana tany Okinawa [ny sampan-draharaha miandrikitra ny fifindràmonina] tamin'izy ireo nikaroka tao amin'ny kaonty Facebook sy ny lahatsoratr'izy ireo. Tafiditra tao anatin'ny vanimpotoana izay mety hahavoarara anao tsy hiditra any Etazonia noho izay nosoratanao isika.
Efa ela no nanohitra ny fisian'ny tobin'ny miaramila Amerikàna any ireo mponina efa nipetraka ela tao amin'ny prefektoran'i Okinawa. Tsy ela akory izay, nifantohan'ireo hetsipanoherana ilay fanorenana fotodrafitrasa vaovao iray ao aminà toerana manana tontolo iainana saropady.
Nomarihan'ny hafa fa tarika maro avy amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao no nanana olana tao amin'ny sisintanin'ny Amerikana, indrindra raha tonga tsy mitondra ny taratasy momba azy izy ireo. Olona iray mpaneho hevitra no nanontany tena raha tonga tamin'ny alàlan'ny fahazoandàlana hanao fizahantany (渡航visa) ny LOUDNESS, izay araka ny lalàna dia tsy mamela azy ireo hilalao manoloana mpanatrika nandoa vola ao Etazonia
— 椎名 令 @4/30渋谷RubyRoom (@rey_shiina) April 19, 2017
Nandre aho tantaranà tarika avy any Eoropa Atsinanana tonga niaraka tamin'ny fahazoandàlan'ny mpizahatany tsy maintsy nanafoana ny fitetezam-paritra hataony taorian'ny nahavoarara azy ireo tsy hahazo hiditra, ary ankehitriny dia ny tarika Japoney tonga amin'ny fahazoandàlan'ny mpitsidika no voarara tsy mahazo miditra. Raha tsy mahazo miditra any ny LOUDNESS, na iza na iza dia tsy mahazo. Miditra ao amin'ny “vanimpotoanan'ny fitokanà-monina nasionaly” ve i Etazonia? Antenaiko fa mijanona misokatra i Eoropa sy Amerika Atsimo.
Araka ny tafatata tao amin'ny gazety Chicago Tribune niarahana tamin'ny mpitantana ny Reggie's, ilay trano filanonana amin'ny alina izay tokony hanombohan'ny LOUDNESS ny fitetezam-paritra any Amerika, ny olana dia toa lasa niha-henjana ny lalàna momba ny antontan-taratasy hatramin'ny fitetezam-paritra farany nataon'ilay tarika tany Etazonia.
Nilaza i Robbyt Glick, tompon'ny Reggie's, fa niresaka tamin'ny solontenan'ny tarika misahana ny fifandraisana amin'ny mpanao gazety, izay nilaza olana momba ny “taratasy famelàna malalaka”, izay azo nekena hidirany tamin'ny fitsidihana farany nataon'ny tarika tany Etazonia, nefa noraràna tamin'ity indray mitoraka ity.
“Somary sarotsarotra” hoy Glick. “Tsy fantatro na avy amin'ny fitantanana na raha toa nanao izany araka izay fahalalàny fotsiny ny Loudness, fa misy fahasamihafàny hatramin'ny nahatongavan'ny filoha vaovao.
Nilaza tamin'ny Japan Today ny mpiandraikitra ny LOUDNESS fa, tany aloha, afaka nitety an'i Etazonia tamin'ny alalan'ny fanasàna manokana ny tarika, fa tamin'ity indray mitoraka ity dia notakian'ny sampan-draharaha miandraikitra ny fifindràmonina ny fahazoandàlana ho an'ireo mpitendry.
Tsy irery ny tarika. Ny tantara vao haingana tao amin'ny The Stranger an'ny Seattle dia mitantara amin'ny antsipirihany fa toa tsy misy antony mivaingana tokony hahavoaroaka ireo mpanakanto avy any amin'ny firenena hafa ao amin'ireo seranam-piaramanidina Amerikana.